राष्ट्रिय युद्धहरुमा थारुहरुको राष्ट्रवादी चरित्र – Dangisharan Khabar
दंगीशरण खबर १० जेष्ठ २०७७, शनिबार १०:०२
वि.सं. १८७१ देखि १८७३ सम्म तदनुसार सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म भएको नेपाल–अंग्रेज बीचको युद्धमा पनि तराईका थारुहरुको ठूलो योगदान गरेको विषयवस्तु लिखित दस्तावेजको रुपमा प्रकाशन भएको छ । त्यस युद्धमा थारु समुदायले निर्वाह गरेको राष्ट्रवादी र देशभक्तिपूर्ण भूमिकाको कदर गर्दै गिर्वाणयुद्धविक्रम शाहले तराईका थारुहरुलाई प्रदान गरेको लालमोहर साक्षी छ ।
वि.सं. १८७१ देखि १८७३ सम्म तदनुसार सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल–अंग्रेज बीच युद्ध चल्यो । त्यस युद्धमा पनि तराईका थारुहरुको ठूलो योगदान गरेको विषयवस्तु लिखित दस्तावेजको रुपमा प्रकाशन भएको छ । युद्धमा थारु समुदायले निर्वाह गरेको राष्ट्रवादी र देशभक्तिपूर्ण भूमिकाको कदर गर्दै गिर्वाणयुद्धविक्रम शाहले तराईका थारुहरुलाई प्रदान गरेको लालमोहर साक्षी छ ।
सिपाहीहरुको भरणपोषणका लागि तराईका थारुहरुले खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको कुरा निरन्तर कायमै थियो । विभिन्न समयमा हुने युद्धको लागि खर्च जुटाउन तराईका थारुहरु समर्थ थिए भनेर कुर्त मेयर, जिसेल क्राउसकोफले पनि उल्लेख गरेका छन् । नेपाल–अंग्रेज युद्धमा नेपाली फौजलाई हराउनका लागि अंग्रेजहरुको सामरिक चाल अन्तर्गत अंग्रेजले तराईका थारुहरुलाई खाद्यान्न उत्पादन गर्न बन्देज गरिदिएका थिए ।
थारुहरुले प्राप्त गरेका कतिपय लालमोहरहरु विभिन्न समयमा आगलागी, बाढी लगायत प्रकोपहरुमा नष्ट भएपनि ऐतिहासिक पत्र नं. ३१ एउटा प्रतिनिधि दस्तावेज हो । त्यस युद्धमा पर्सागढीमा भएको लडाइँमा रंजित चौधरीले उल्लेखनीय मेहनत गरेको रिझवापत पर्सा जिल्ला, सिधमास प्रगन्नामध्ये वसडिलवा र लोरिआड गरी दुई गाउँहरुमा वि.सं. १८७२ वैशाखदेखि जलकर, वनकर आदि दस्तुर उठाई सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको विषय उल्लेख छ । त्यस जग्गामा आवाद तथा गुल्जार गरी त्यसबाट हुने उत्पादन उपभोग गर्ने तथा सन्तानदरसन्तानसम्म वेषवुन्यादको काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको कुरा यो दस्तावेजमा लेखिएको छ ।
अहिले पनि चितवनका थारु समुदायका आफ्नै परिवार कोहि सीमापारी र कोहि वारी रहेका छन् । तर पनि अंग्रेजको सीमाभित्र रहेका थारु परिवार स्थायी रुपमा नेपाल आएनन् । नेपालको सीमाभित्र रहेका थारुहरु पनि अंग्रेजको सीमाभित्र बसाइ सर्न गएन । सुगौली सन्धी भएको दुई सय वर्षभन्दा बढी भएको छ ।
यतिखेर फेरि पनि थारु समुदायका छाता संगठन थारु कल्याणकारिणी सभा लगायत आन्दोलनरत थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा र थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले छुट्टाछुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी समग्र थारु समुदायलाई पुनः राष्ट्रियताको पक्षमा उभ्याएको छ । यद्यपि थारु समुदायका माग र मुद्दाहरु नेपालको संविधान अझै अटाएको छैन । थारुका आवाजलाई राज्यले अझै सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कुनै दिन ती समुदायका सवालहरु संविधानमा समावेश गर्नका लागि संविधान संशोधन हुने नै छ । संशोधन गरिनुपर्छ । तीन करोड जनताहरुलाई एकसूत्रमा बाँधेर राष्ट्रिय हित र सीमा सुरक्षामा परिचालन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
माना बोक मुरी भिट्त्रैना ब्याला धानम भारी क्षति १० जेष्ठ २०७७, शनिबार १०:०२
थारु समुदायको दशैं : सेतो टीका र मकैको जमरा १० जेष्ठ २०७७, शनिबार १०:०२
मौरिपालक महासंघ दाङको अध्यक्षमा श्रेष्ठ १० जेष्ठ २०७७, शनिबार १०:०२
दङाली युवा नेता मेटमणी चौधरी मन्त्री बन्दै १० जेष्ठ २०७७, शनिबार १०:०२
रेशम चौधरीलाई छुटाउन थरुहट संघर्ष समिति ‘निर्णायक आन्दोलन’ को तयारीमा १० जेष्ठ २०७७, शनिबार १०:०२
डश्यक् सख्या गीत १० जेष्ठ २०७७, शनिबार १०:०२